EX - ABSDF: တရုတ်နယ်စပ်က အကြွေပန်းများ
မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ သူ၏ ကြိုးဆွဲရာ ကကြမည်ဖြစ်သော ရုပ်သေးတအုပ်အား အရပ်ဝတ်အဆောင်ယောင်များ လဲစေပြီ အာဏာ အပြောင်အလွဲလေး မလုပ်ခင်လေးမှာပင် အများသူငှာ သတိမမူမိသော ရှု့ထောက်ကွက်အား စစ်အုပ်စုမှ ဖန်တီးမွေးဖွားပေးခဲ့လေသော အရာတခုကတော့၊ (ယခု လက်တွေ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ညနေခင်းလေးတွင် “အာရှ အသုံးတော်ခံမြို့ပြ ညခင်းကလပ်” မှာ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်များလောက်သာ ရှိသော သမီးပျိုလေးများက ၄င်း ညကလပ်အား လာရောက်ကြသော တဏှာရူး နှာဖူးများ၏ အရှေ့တွင် လူးလာခေါက်တုပ် လျောက်ပြနေခဲ့ကြရသော ထိုနေရာလေးသည်
မပေါ်တပေါ် အ၀တ်ပါးလေးများ တင်ဖုံးရုံမျှ မလုံ့တလုံ ကိုယ်လုံးလေးများဖြင့် အလှပြနေကြရသည့် ခလေးပြည်တန်စာများဖြင့် စည်ကားနေလေ၏။ တဦးနှင့်တဦး ထိလိုက်ပွတ်တ်ိုက်ဖြင့် စကပ်တိုနံ့နံ့ ဆယ်ကျော်သက် ကျော်ရုံမျှလောက်သော မိန်းမငယ်လေးများ က ညကလပ်အား ထုတ်ဖေါ်ပြသထားသော စင်မြင့်လေးတွင် အသွားအပြန် လူးလားခေါက်ပြန် လျောက်ပြ နေကြရသည်။
Before the regime just transfer the power to its puppet clusters who are changed civilian material decorative suits, this isaside of life the Burmese military junta might prefer you did not see: girls who appear to be 13 and 14 years old paraded in front of the lusty customers atanightclub whereabeauty contest thinly veils child prostitution. Tottering in stiletto heels and miniskirts, young teenage girls criss-crossed the dance-floor as part ofanightly "modelling" show at the Asia Entertainment City nightclub onarecent evening in Rangoon.
အဆိုပါ မိန်းခလေးငယ်လေးများအား ရှေ့မှ ထိမ်းကြောင်းညွန်ကြားသူက သူ၏ အနီးနားစားပွဲမှ အလူငယ်တသိုက်တို့ ပွဲကျရာနေရာမှာတော့ “အခု ထုတ်ဖေါ်ပြသနေတဲ့ မိန်းခလေးများ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြာင်းနှင့် တညတာ သီးသန့် ပျော်ပါးရေးအတွက် အငယ်ဆုံး မိန်းခလေး ဆိုလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ စပြီး လူအုပ်များအကြားတွင် ၀င်ရောက် ဧည့်ခံနေသော အသက်အနည်းငယ်ကြီးသော မိန်းခလေးများအဖို့ကတော့ဖြင့် ဒီထက်သက်သာသော ဈေးနုံန်းဖြင့် ညှိနိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာပြည်သည် ဒေသတွင်း လူကုန်ကူးခံရသော လိင်မှုဆိုင်ရာ ကုန်ကူးသန်းမှုအတွက် အဓိက အချက်ခြာကျသော တိုင်းပြည်ကြီးတပြည် ဖြစ်နေပြီး ၊“စစ်အုပ်စု၏ အစီငေါ်မတည့် မှားယွင်းသော စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖေါက်မှုများ နှင့် အတင်းအဓမ္မ အလုပ်စေခိုင်းခြင်းတို့က၊ မြန်မာပြည်၏ အံဘွယ်ဘနန်းပြောင်မြောက်သော လူသားကုန်ကူးသန်းမှု ပြသနာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသော အခြေခံကျသည့် အကြောင်းရာများ ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု အမေ၇ိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက် စာတမ်းတွင် တင်ပြထားလေသည်။
Burma is alreadyabig source country for people trafficked to the regional sex trade. "The junta's gross economic mismanagement, human rights abuses and its policy of using forced labour are the top causal factors for Burma's significant trafficking problem," the US state department noted in its 2007 and 2010 trafficking report.
သံယံဇာတအလွန်ပုံအောကြီးမားကြွယ်ဝသော နိုင်ငံအား စစ်အုပ်စု၏ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော တိုင်းသူပြည်သားများက သူတို့၏ အခွင့်လမ်းများအတွက် ရှာဖွေရန် တနေရာရာ ရောက်ရာပေါင်ရာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အမိနိုင်ငံအား စွန့်ခွာ ထွက်လာကြရခြင်းတို့ကြောင့် ဆောက်တည်ရာမရသော စီးပွါးရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒများက သာ လွှမ်းမိုး ထွန်းကားသွားလေသော အခြေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာပြည်၏ ၅၅ သန်းမျှလောက်သော လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ တဦးချင်း ပျန်းမျှ တနှစ်စာဝင်ငွေမှာ အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၀ လောက်သာ ယေဘူယျ ရရှိကြကာ တိုင်းပြည်မှ စွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီး အခြားတနေရာတွင် စီးပွါးရှာရန် အကြောင်းတရားသည် နေရာအနှံ့ပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရသည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ထပ်မံ ထောက်ပြထားသည်။
Disastrous economic policies pursued by the military have hobbled this resource-rich nation and hundreds of thousands have left the country to seek their fortunes elsewhere. With an estimated annual income of just $220ahead among Burma's 55 million people, fleeing the country to work elsewhere is all too common according to the state department.
ထိုသို့ တရုတ်ပြည်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဆီသို့ ယခု လက်ရှိ နေပြည်တော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အုပ်ချုပ်သော ကာလမှာပင် အနှောက်ယှက် တစုံတ၇ာမရှိပဲ လူမှောင်ခို ခိုထုတ်ပို့သွင်းခြင်း ခံရသူမိန်းကလေးအများပြားရှိခဲ့ရသည်။ ထိုအထဲတွင် သနားစရာကောင်းသော မခင်အေး တယောက်အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး သူမအနေဖြင့် စီးပွါးရေး အခွင့်လမ်းကောင်းတခု တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင် ရလိုရငြားဖြင့် ရှာဖွေရန် ရောက်ခဲ့ရသည်။
သူမတွင် အမေအိုနှင့် ဖခင်အို အပြင် မောင်ငယ်လေး နှင့် ညီမငယ်လေးများ မန္တလေးတွင် ရှိပြီး သူတို့အား ထောက်ပံ့၇န် အလို့ငှာ လက်ရှိ ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်အား သူမအဖို့ ရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲလွန်းသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။ သူမအဖို့ တခါတရံ ဖေါက်သယ်တဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၄၀ လောက် ရပြီး သူမ၏ အလုပ်မှာ ညဘက်တွင် လုပ်ရသော အလုပ်အမျိုးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ် (ဥပဒေ)တွင် သင်ယူနေခဲ့ရင်းမှ ယခုဘ၀ ရောက်ခဲ့ရသည်ဟုလည်း ထပ်မံ ပြောပြသည်။
Most young girls are being smuggled to China and Thailand without obstacle determent when Nay Pyitaw government led by president Thein Sein. Khin Aye becomesapoor victim among them to seek good opportunity on Chinese-Burmese border.
With an old mother, old father and young brothers and sisters to support in Mandalay, Khin Aye said that prostitution was my difficult choice but I had to choose that and sometimes I could earn $40 from one customer. This was just her night job, she said, adding that she was in her second year at university, studying to become "an advocate of the law".
ယခု ခင်အေးတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ပိုး ရှိနေခဲ့ကြောင်းနှင့် သူမ မည်သူ့ကိုမှ အသိမပေးပဲ လျှို့ဝှက်ထားကြောင်း ပြောပြသည်။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းများ ယခု တရုတ်နယ်စပ် လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသူ အများထဲမှ အချို့ အတော်များများသည်လဲ သူမကဲ့သို့ပင် ရောဂါပိုး၇ှိနေခဲ့ကြသည်ဟု ဆက်လက်ပြောပြသည်။ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါဆိုးသည် ရှေ့တောင်အာရှတွင် ရှိနေသော ဘေးဆိုးကြီးရောဂါဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်တွင် ၄င်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါ ပိုးရှိသူပေါင်း ၃သိန်း ၆ သောင်းခန့်၇ှိနေခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ မှ ခန့်မှန်း ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Khin Aye said she was with HIV positive and she kept secret. She continued that some of her friends in sex industry on the border were also. One of the most serious HIV epidemics in Southeast Asia - an estimated 360,000 Burmese people was living with HIV at the end of 2011, according to the UN.
ကုလသမဂ္ဂ၏ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ လေ့လာရေး အစီစဉ်မှ ထင်၇ှားသော အချက်လက်များအား အခြေခံထားပြီး မြန်မာ ပြည့်တန်ဆာ ၃ ဦးတွင် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ( အေအိုင်ဒီအက်) တဦးရှိနေကြောင်းလည် ပြောဆိုပါသည်။ မြန်မာ့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသော ဝေဒနာရှင် ထက်ဝက်ကျော်အတွက် တနှစ်လျှင် အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်း သုံးသောင်း ခုနှစ်ထောင် လောက်သာ သုံးစွဲကြောင်း ဖေါ်ပြထားပြီး ရောဂါရှင် တဦးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တပြား( မြန်မာငွေ) ၈ ကျပ် လောက်သာ သုံးစွဲ သည်ဟု ဆိုပါသည်။
According to the UN's programme on HIV/Aids, and based on available statistics, one in three of Burma's sex workers were infected with HIV . However, the ministry of health's expenditure on HIV was estimated that year to be around $137,000, or less than half of $0.01ahead, the UN said.
ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်သူအများ ပြောကြားချက်အရဆိုလျှင် လက်ရှိ အာဏာပိုင် အစိုးရသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ သက်တောင့်သက်သာ ငြိမ်ငြောင်းသာယာစွာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင်လည်း သဘာဝ အရင်းမြစ် သံယံဇာတများ စုပ်ယူ တူးဖေါ်ရာမှ ငွေအမြောက်များအလုံးရင်းရရှိနေပြီး ထိုလုပ်ငန်းများထဲတွင် တရုတ်၊ အန္ဒိယ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ယခု အနောက်နိုင်ငံများပါ ၀င်ရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေပြီဖြစ်သည်။
“တကယ် ချစ်ခင် မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသော ခလေးငယ်များ အဖို့ တိုက်၇ိုက် ပတ်သက်ဆက်နွယ်လာတဲ့ ထိခိုက်က်မှုများ မြင့်တက်လာနေပြီး ၊ အစိုး၇အနေနဲ့ အခုလို သဘာဝ အရင်းမြစ် သံယံဇာတများမှ ၇ရှိသော ငွေများအား အလုံအလောက် ကူညီကာကွယ်ကုသဖို့ လုပ်ဆောင် ဆုံးဖြတ်တာ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ရန်ကုန်တွင် လက်ရှိ အခြေစိုက်နေသော အမေ၇ိကန် သံတမန်တဦးက ပြောဆိုပါသည်။
Several people spoken to in Rangoon said that the government authorities who have lived comfortably for decades and now have new sources of revenues from contracts with countries such as China, France, India, Thailand and now western countries to extract natural resources. " A direct impact on children who are already vulnerable are increasing their risk significantly and government does not decide yet to expend enough care with revenue from the natural resources”, said an American diplomat in Yangoon.
(ဆက်လက်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန် အချက်လက်များအား ကြိုးစားတင်ပြပေးပါဦးမည်)
Maha Mingyi's status